भोली आउने बजेटमा बृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलव बढ्दै ! यस्तो छ तयारी – Purbi sanchar
भोली आउने बजेटमा बृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलव बढ्दै ! यस्तो छ तयारी
२०७६ जेष्ठ १४, मंगलवार १६:१९
काठमाडौं / सरकारले बृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलव बढाउने गरी बजेट निर्माण अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा नेतृत्वको टीमले पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा आधारित भएर बिकाश आयोजनादेखि बृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलव बढाउने गरी बजेट निर्माणलाई अघि बढाएको हो ।
हाल ७० वर्ष उमेर कटेका वृद्धवृद्धाले एक हजार भत्ता र एक हजार औषधोपचार खर्च गरी मासिक दुई हजार भत्ता पाउँदै आएका छन । त्यसभन्दा कम उमेरका, तर भत्ता पाउने व्यक्तिहरूले सामान्यतः मासिक एक हजार भत्ता पाउँदै आएका छन । संघीय संसदमा भोलि प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ७० वर्ष उमेर कटेकालाई भत्ता र औषधोपचार खर्चमा पाँच–पाँच सय वृद्धि गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले यही नीतिअनुसार बजेटलाई अन्तिम रुप दिनुभएको अर्थस्रोतले बतायो ।
सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । नेपालमा हाल वृद्धभत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या हाल १२ लाख आठ हजार एक सय ३३ रहको सरकारी आँकडा छ । त्यस्तै, एकल महिला र विधवाको संख्या ६ लाख ९६ हजार पाँच सय २४ रहेका छन । यी सबैलाई सरकारले मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई मासिक दुई हजार र आंशिक अपांगता भएकालाई मासिक ६ सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई मासिक दुई हजार र पिछडिएको क्षेत्रका बालबालिकालाई मासिक चार सयका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २४ लाख ९८ हजार पाँच सय ३२ छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ११ दशमलव ५७ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २२ लाख ३९ हजार तीन सय ६३ थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यही रूपमा संख्या बढ्दा २७ लाख ८७ हजार ६ सय १२ हनेछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले ४६ अर्ब ९१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको साढे ३ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षमा यसका लागि सरकारले ३८ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसअघिको वर्षमा भने ३२ अर्ब ८९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । गएका दुई वर्षमा वार्षिक औसत २० प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम वृद्धि भइरहेको छ । त्यसो हुँदा वृद्धभत्ता वृद्धि नहुँदा नै करिब ५६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
यसैगरी निजामति कर्मचारीको तलव पनि बढाउने गृहकार्यमा अर्थमन्त्री खतिवडा रहनुभएको छ । यसपटकको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनैपर्ने कानुनी बाध्यतामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा रहनुभएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा सरकारी कर्मचारीको तलब दुई वर्षमा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण यसपटक कर्मचारीको तलब बढाउन लागिएको छ ।
यसपटक अर्थमन्त्री खतिवडाले तल्ला तहका कर्मचारीको तलब आधार नै बढाउने तयारी गर्नुभएको छ । अहिले सबैभन्दा कम तलब पाउने कर्मचारीले १८ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन । त्यसलाई बढाएर २५ हजारको हाराहारीमा पुर्याउने तयारीमा अर्थमन्त्री खतिवडा रहनुभएको छ । ‘आधारभुत तलव २५ हजार पुर्याउने अर्थमन्त्रीको योजना छ, यहीअनुसार काम अघि बढेको छ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न एक सदस्यले भने । उनका अनुसार खरिदार तथा सुब्बा तहका कर्मचारीको तलबको आधार पनि बढाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।